Thought of the week | UKUHLANGULWA KWESHISHINI NGOKOMTHETHO WEBHODI - STBB
Home > Thought Of The Week > Thought of the week | UKUHLANGULWA KWESHISHINI NGOKOMTHETHO WEBHODI
Xa amawakawaka amashishi aseMzantsi Afrika avala iingcango zawo nge-26 Matshi 2020, inyani elusizi kukuba uninzi lwazo alunakuze luvule kwakhona tu. Njengoko iziphumo zoqoqosho zamanyathelo amiselwe ukuthintela ukusasazeka kwe-COVID-19 zivakala kuzozonke iibhodi, iinkampani ezikunkxinzelelo lwezemali ziyanyanzeleka ukuba zivavanye ukhetho lwabo. ISahluko se-6 soMthetho weeNkampani sinikezela ngenkampani okanye iqumrhu elingavulelekanga ukuba lingene kuhlangulo lweshishini njengenye indlela yokupheliswa.
Ukuhlangula ishishini yinkqubo yokuququzelela ukuvuselelwa kwenkampani ngezimali, kwaye kungaqalwa ngokuzithandela (ngendlela yokufaka isisombululo sebhodi ukubeka inkampani ekuhlanguleni nge-CIPC) okanye ngendlela yenkundla. Ukuba inkampani inengxaki yokufumana imali, yaye kubonakala ngathi akukholeleki ukuba inkampani izawukwazi ukuhlawula onke amatyala ayo njengoko kufuneka ihlawulwe ngaphakathi kwiinyanga ezintandathu kwaye uMthetho wenza isibonelelo sokuba umntu ochaphazelekayo afake isicelo enkundleni, nje ukuba inkampani ibincedisiwe ekuhlangulweni kweshishini, ukuba intlangulo ibekelwe ecaleni ngenxa yezizathu ezithile, kubandakanya nalapho inkampani ingazifezekisi iimfuno esele zikhankanyiwe.
Ukuba iinkqubo zokuhlangula zeshishini ziqalisiwe, njengakwimeko ezininzi, ngesigqibo sebhodi, kufuneka kunikwe isaziso kwiintsuku ezintlanu zokufaka isisombululo kunye ne-CIPC kumntu ngamnye ochaphazelekayo sisigqibo. Oku kubandakanya abanini zabelo, ababolekisi kunye nabasebenzi (ngemanyano yabasebenzi ebhalisiweyo okanye ummeli). Ibhodi ikwamele ichonge ingcibi yokuhlangula ishishini, eya kuthi ilawule ulawulo lwenkampani. Ngelixa abalawuli benkampani bengasuswanga okanye batshintshiwe, bathotyelwa ligunya lengcali, umsebenzi wayo ophambili kukuyila nokwenza isicwangciso sokuhlangula. Isicwangciso esinjalo kuya kufuneka sivunywe ngababolekisi beenkampani ngeevoti ezingama-75%.
Esinye sezona ziphumo zibalulekileyo kukuhlangulwa kweshishini kukuba inkampani ifumana ukuyeka kwethutyana kwiinkqubo zomthetho, ezimiselwe njengendawo yokuphefumla apho inkampani iphinda iphinde igqibe khona kwaye ithathe isigqibo malunga nokuba iqhubeke njani. Emva kokuba isicwangciso sokuhlangula seshishini siphunyeziwe ukugqitywa, ukuhlangulwa kweshishini kupheliswa ngokugcwaliswa kwesaziso sokugqitywa kwi-CIPC.